Bakka Buutuu Mana Maree Bakka Bu’oota Ameerikaa ,Keren Baas
Dhimmootii Afriikaatti dura teessuun koree birkii kan dhimmi alaa mana maree bakka bu’oota uummataa Ameerikaa Keren Bass hookkara Itiyoophiyaa keessatti ka’e ilaalchisuun ibsa kennanii jiru.
Baas ibsa isaanii kanaan maatii weellisaa beekamaa fi leellisaa mirga namaa kan ta’e Hacaaluu Hundeessaa akkasumas kanneen ajjeechaa isaa booda hookkara ka’een lubbuun isaanii dhabameef gadda natti dhaga’ame ibsuun fedha jedhan.
Sagaleen lammiiwwan Itiyoopiyaa maraa dhaga’amuu qaba, uummannis nagaa dhaan wal ga’uuf mirga qabaachuu qabu jedhan Karen Bass. Haalli Itiyoopiyaa keessaa hedduu mudamsuun kan guutamee fi lammiiwwan ishee aaranii jiran. Yeroon kun yeroo itti mootummaan furmaata haqaa fi ifa ta’e lammiiwan biyyattii maraaf akka kennamu hoogganummaan geggeessuu dha jedhan.
Mootummaan Itiyoopiyaa jijjiirama gaariin akka dhufuuf akka hojjetun jajjabeessa kan jedhan Baas, interneetii cufame banee naannoo walitti bu’iinsaan waggoota hedduf jeeqame keessatti tasgabii akka fidun gaafadha jedhan. Kanneen biyyattii keessatti adda addummaan akka dhufuuf sababaa ta’uu dhaan jibbiinsii fi hookkarri akka ka’u godhani murtiitti akka dhiyeessu illee nan gaafadha jedhan.